काँग्रेसले टुङ्ग्यायो ४ महिला सहित १० उम्मेदवारको नाम (नामावली सहित)
२०७४ कार्तिक १३ सोमबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनको लागि ४ जना महिला सहित १० जना उम्मेदवारको नाम टुङ्ग्याएको छ । ... बाँकी अंश»
कटारीबाट ओखलढुँगा जादै गरेको सुमो दुर्घटना ८ जनाको मृत्यू
२०७४ कार्तिक १३ सोमबार, उदयपुरको कटारीबाट ओखलढुँगा जादै गरेको ना १ ज ३४०४ नम्बरको सुमो दर्घटना हुदा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
गुल्मीमा माइक्रो दुर्घटना हुदा ७ जनाको मृत्यु, माइक्रो र जिप ठोकिदा माइक्रो ३०० मिटर तल झर्यो
२०७४ कार्तिक १३ सोमबार, काठमाडौं । वुटवलबाट गुल्मी सदरमुकाम तम्घास जादैँ गरेको बा ४ ख ५५०१ नम्बरको माइक्रो दुर्घटना हुदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
अर्वपती विनोध चौधरी काँग्रेसको समानुपातिक सूचीमा, छोडे एमाले
२०७४ कार्तिक १३ सोमबार, काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा अर्वपती विनौ चौधरी पनि अटाएका छन्। नेपाली काँग्रेसले आइतवार संसोधन सहित बुझाएको सूचीमा चौधरीको नाम रहेको छ। ... बाँकी अंश»
एमाले यूवा संघका केन्द्रीय सदस्य शेर बहादुरलाई भित्र्याए शेर बहादुरले काँग्रेसमा
२०७४ कार्तिक १३ सोमबार, काठमाडौं। केहि दिन अघी रामेछापको वेथान थानापती लगायतका गाउँका लगभग सबै यूवा काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। कम्युनिष्ट गढ मानिएको सो क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा माओवादीको प्रभाव ज्यादा थियो। जन्मदै कम्युनिष्ट भएर जन्मिएका बताउने नविन लामा सहितका दर्जनौ माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु काँग्रेसमा आएपछि सो गाउँमा काँग्रेसको प्रभाव ह्वात्तै वढेको छ। ... बाँकी अंश»
भूमिगत कालमा प्रचण्डलार्इ काठमाडौंमा आश्रय दिने सुवेदी काँग्रेसबाट उम्मेदवार
२०७४ कार्तिक १२ आइतबार, काठमाडौं । भूमिगतकालमा प्रचण्डलाई काठमाडौंमा ल्याएर आश्रय दिएका धादिङका शिव सुवेदी यो चुनावमा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् । ... बाँकी अंश»
गोविन्दराज जोशी विरुद्ध ३ केन्द्रीय सदस्य सहित काँग्रेसका १६ जनाले निकाले वक्तव्य
२०७४ कार्तिक १२ आइतबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी माथि कारबाहीको माग राख्दै नेपाली काँग्रेसका तनहुँ जिल्लाका नेताहरुले वक्तव्य जारी गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
आर्थिक विकासको जग हाल्न काँग्रेसको ऐतिहासिक प्रयास, के के गर्यो काम ?
२०७४ कार्तिक १२ आइतबार, काठमाडौं । पुँजीवादी अर्थतन्त्रको पक्षपोषक पार्टी नेपाली काँग्रेसको आर्थिक नीति नेपाल सुहाउँदो आर्थिक नीति मध्ये एक उत्कृष्ट नीति मानिन्छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ कार्तिक १२ आइतबार, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई मतपत्रको बारेमा सोधेको प्रश्नका बारेमा जवाफ दिन गम्भिर परामर्शमा आयोग गम्भिर परामर्शमा जुटेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरु र उच्च अधिकृतहरु विहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन्। ... बाँकी अंश»
माधव नेपाल पक्ष बढारिएपछि एमाले कास्कीमा भाँडभैलो
२०७४ कार्तिक १२ आइतबार, पोखरा । उम्मेदवार मनोनयनमा एकपक्षीय भएको भन्दै कास्की एमालेमा अन्तरविरोध देखिन थालेको छ । एमालेभित्रै एक खेमालाई षड्यन्त्रपुर्वक उम्मेदवार सिफारिसमा रोक लगाएको भन्दै एमाले स्थायी कमिटिमा उजुरी परेको छ । ... बाँकी अंश»
के चाहन्छ काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद ? कसरी हुन्छ यसबाट विकास ?
२०७४ कार्तिक ११ शनिबार, काठमाडौं । २००७ सालको क्रान्तिदेखि मुलुकको पहिलो शक्तिको रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको नेपाली काँग्रेस फेरि पनि आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा लिएर नेपाली जनतामा जाँदैछ । ... बाँकी अंश»
धरापमा बाम गठबन्धन, एमाले दीर्घकालीन सोचमा, माओवादीको सोच चुनावसम्म मात्रै
२०७४ कार्तिक ११ शनिबार, काठमाडौँ । नेपालमा बेलाबखत हुने एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको बहसलाई नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को चुनावी गठबन्धनले पुनः तताएको छ ... बाँकी अंश»
चर्चित उद्योगी सूर्य बहादुर केसी काँग्रेसमा प्रवेश, प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताले भित्र्याए
२०७४ कार्तिक ११ शनिबार, काठमाडौं । पोखराका चर्चित उद्योगी एवं राप्रपाका पूर्व कोषाध्यक्ष सूर्य बहादुर केसी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान
२०७४ कार्तिक ११ शनिबार, काठमाडौँ । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीनै तहको निर्वाचनका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ । ... बाँकी अंश»
मान्छेको ज्यान जानेगरी भएको विर्तामोडमा कस्तो छ स्थिती, कर्फ्यू जारी
२०७४ कार्तिक ११ शनिबार, काठमाडौं । शुक्रबारदेखी तनावग्रस्त बनेको झापा बिर्तामोडमा शनिबार भने अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । कर्फ्यू आदेश जारी गरेको २४ घण्टासम्ममा त्यहाँको स्थिती सामान्य बन्दै गएको छ । ... बाँकी अंश»
त्रिशूलीको दुर्घटनामा परि मर्नेको सङख्या १९ पुग्यो
२०७४ कार्तिक ११ शनिबार, काठमाडौं । राजविराजबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परि १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १६ जना घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»
त्रिशुलीमा दुर्घटना भएको बसबाट ११ शव निकालियो, तेह्र घाइतेको उद्धार
२०७४ कार्तिक ११ शनिबार, धादिङ। राजविराजबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस आज बिहान ५ बजेतिर त्रिशूली नदीमा डुवेको छ । ... बाँकी अंश»
प्रतिनिधि सभाका लागि काँग्रेसबाट थप ८ जनाको क्षेत्र टुंगो
२०७४ कार्तिक १० शुक्रबार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि थप ८ जना उमेदवार तय गरेको छ । ... बाँकी अंश»
विर्तामोडमा सेना उत्रियो, रातभर सडकमै रहने
२०७४ कार्तिक १० शुक्रबार, काठमाडौं । सेना परिचालन गर्न अनुमती मागेको स्थानीय प्रशासनले नेपाली सेनालाई सडकमा उतारेको छ । ... बाँकी अंश»
कांग्रेसप्रतिको निष्ठा अटल छ, एमालेले भ्रम सिर्जना गर्‍यो: शेरचन
२०७४ कार्तिक १० शुक्रबार, मुस्ताङ्ग । नेपाली कांग्रेसबाट थसाङ्ग गाउँपालिका वडा ५ को वडा सदस्यमा निर्वाचित सदस्य एंव नेपाली कांग्रेस कुन्जोका ईकाई सचिव गौत्तम शेरचनले आफुले कांग्रेस त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्ने खवर झुठो भएको भन्दै त्यसप्रति विरोध गरेका छन् । ... बाँकी अंश»